विचारशून्य राजनीतिको जोखिम- विचार - कान्तिपुर समाचार
विचारशून्य राजनीतिको जोखिम
विचारबिनाको अँध्यारोमा तरबार चलाएर नेपालको गरिबी र कुशासन हटाउँछौं भन्ने तिलस्मीहरूलाई हामीले भन्नु जरुरी छ— विकास चाहिएको त हो तर त्यो समता, न्याय र स्वतन्त्रताको धरातलमा खडा हुनुपर्छ ।
श्रावण २२, २०७८ जीवन क्षत्री
न हामी राजतन्त्रवादी, न हामी गणतन्त्रवादी; हामी त विकास, सुशासन र समृद्धिवादी । हामीजस्ता सक्षम र इमानदार मानिसहरूले बनेको दलको सत्तारोहण भयो भने विकास र समृद्धि आइहाल्छ, त्यसैले व्यर्थै विचार वा मूल्य–मान्यताको गलफत्तीमा किन पर्ने ? अनि परस्पर विरोधी भए पनि मौसमअनुसारका नारा र एजेन्डाहरू उरालेर लोकप्रियता किन हासिल नगर्ने ?
केही दिनदेखि ‘वैकल्पिक’ राजनीतिको यो सूत्र नेपालमा चर्चामा छ । नाम वा बदनामी जेका लागि भए पनि चर्चामा आउन ‘स्टन्ट’ हरू गरेर इतिहास नै बदलेको आत्मरतिमा रमाउनेहरूको यहाँ नाम लिएर तिनलाई पुरस्कृत गर्नु जरुरी छैन । तर तिनले आम मानसमा छरिरहेको भ्रम चिर्न भने जरुरी छ ।
नेपालमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर पार्टीहरू बन्ने बेला भारतको आम आदमी पार्टी (एएपी) को खुब चर्चा हुन्थ्यो । अहिले पनि आम आदमी पार्टीको नाम लिनासाथ हामी धेरैको दिमागमा दिल्लीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका व्यापक सुधारहरू आउँछन्, निःशुल्क बिजुली आउँछ । त्यसैले नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीति सफल भयो भने धेरथोर भए पनि सुशासनमा बढोत्तरी आउला भन्ने धेरैको अपेक्षा हुने गर्छ । तर अरविन्द केजरीवालको एएपी दिल्लीमा कसरी सरकारमा पुग्यो र त्यहाँ पुगेपछि के गर्‍यो अनि उसको वैचारिकी कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा नेपालमा पर्याप्त बहस वा मन्थन भएको छैन । त्यसैले एएपीका झट्ट हेर्दा नदेखिने पाटाहरूबारे पनि हामी जानकार हुनु आवश्यक छ ताकि भारतीय मतदाताले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउनबाट हामी बच्न सकौं ।
भारतीय कांग्रेसका डा. मनमोहन सिंहको कार्यकालको अन्ततिर भारतमा अन्ना हजारेको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चर्क्यो । त्यही आन्दोलनका बलमा केजरीवालले भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘क्रुसेडर’ को छवि बनाए । लगत्तै उनी एएपी बनाएर चुनावी राजनीतिमा छिरे । दिल्ली राज्यको राजनीतिमा सन् २०१३ को चुनावमा एएपी भाजपापछिको ठूलो दल बनेर उदायो र कांग्रेससित मिलेर गठबन्धन सरकार बनायो । केजरीवालको पहिलो सरकार ४९ दिनमै ढले पनि ७० सिटको दिल्ली संसद्‌मा उनको पार्टीले २०१५ को चुनावमा ६७ सिट जित्यो । २०१९ को आम निर्वाचनमा दिल्लीका सबै क्षेत्रमा हारे पनि २०२० को राज्य निर्वाचनमा फेरि ६२ सिटसहित भारी बहुमत ल्यायो ।
झट्ट हेर्दा देखिइहाल्ने एएपीको राजनीतिक आरोहको यो पाटोपछि अब हेरौं उसको वैचारिकी विकासको पाटो । सन् २०१४ को आम चुनावपछि भारतीय राजनीति धार्मिक पहिचानको वरिपरि रुमल्लिएको छ । व्यक्तिका पेसा, क्षेत्र, जात, भाषा आदि अनेक पहिचान फिका बन्दै गएर धार्मिक पहिचान प्रगाढ बन्दै गएको छ । यसबीच राज्यले निरन्तर रूपमा नागरिकहरूलाई आस्थाकै आधारमा तहीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । सिद्धान्ततः भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि अहिले त्यहाँको केन्द्र र राज्यका बीजेपी सरकारहरूले आफूले ल्याउन खोजेको ‘हिन्दु राष्ट्र’ को अभ्यास गरिरहेका छन् ।
त्यसको परिणामस्वरूप बहुसंख्यक हिन्दुहरूको आत्मसम्मान बढेको, अभूतपूर्व सशक्तीकरण भएको तथा मुसलमान मुगल सम्राट्हरू र इसाई अंग्रेजहरूले भारतमाथि लादेको ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हुँदै गएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न बीजेपी र उसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ सफल भएका छन् । त्यसले उनीहरूलाई ठूलो जनमत दिएको छ र तत्कालका लागि देशव्यापी रूपमा बीजेपीलाई टक्कर दिने राजनीतिक शक्ति भारतमा देखिएको छैन ।
यो अवस्थामा बीजेपीलाई चुनौती दिन चाहने राजनीतिक शक्तिहरूसित दुई विकल्प छन् । एक, बहुलवादी र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संवैधानिक परिपाटीको सशक्त पैरवी गरेर बीजेपीको हिन्दुत्ववादी वैचारिकीलाई ठाडो चुनौती दिने । दुई, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघकै हिन्दुत्ववादी धरातलमा उभिएर बीजेपीसित सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने । बीजेपीका त्यस्ता प्रतिस्पर्धी दलहरूमध्ये दिल्लीकेन्द्रित आम आदमी पार्टी हाम्रा लागि एउटा चाखलाग्दो ‘केस स्टडी’ हुन सक्छ किनकि त्यो पार्टीका केजरीवाललाई गुरु थापेर राजनीति सुरु गरेका केही नेपाली पात्रहरूले हिन्दुवादी राजनीतितिर केजरीवालले भन्दा पनि ठूलो छलाङ लगाएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन केजरीवालले दिल्लीको अक्षरधाम मन्दिरमा भारु ६ करोड खर्चेर लक्ष्मीको पूजा गरे । ९० मिनेटको त्यो पूजामा टेलिभिजन कभरेजसमेत गरेर प्रतिमिनेट २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उनका मन्त्रीहरू श्रीमतीहरूसहित उपस्थित थिए ।
२०२० फेब्रुअरी ८ मा भएको राज्य निर्वाचनमा ठूलो जनमतसहित केजरीवालको आम आदमी पार्टी दिल्लीको सरकारमा पुनः निर्वाचित भएको थियो । त्यसभन्दा महिनौं अगाडिदेखि बीजेपीको केन्द्र सरकारले ल्याएको विभेदकारी नागरिकता कानुनविरुद्ध दिल्लीलगायत भारतभर प्रदर्शनहरू चलिरहेका थिए । त्यसमा अल्पसंख्यक समुदायका मात्रै नभई बहुलतामा विश्वास गर्ने सबै समुदायका भारतीय नागरिकहरू सामेल थिए । २०१९ मा दोस्रोपल्ट निर्वाचित भएका मोदीले २०१४ यता खेपेकै सबैभन्दा ठूलो र दिगो विरोध प्रदर्शन थियो त्यो ।
विभेदकारी कानुन र त्यसविरुद्ध देशव्यापी रूपमा भएको प्रदर्शनका कारण मोदी–बीजेपी सरकारको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर धमिलिइरहेको थियो । त्यसैले मुस्लिम समुदाय र प्रदर्शनकारीहरूसित मोदी सरकार क्षुब्ध थियो । त्यसमाथि दिल्लीको चुनाव हारेपछि तिलमिलाएको बीजेपीका केही नेताहरूले फेब्रुअरी २३ देखि साम्प्रदायिक दंगाको आगो झोसिदिए । केन्द्रको बीजेपी सरकारमातहत रहने दिल्ली प्रहरी तमासे भएर बसिदिएसँगै त्यो दंगामा कम्तीमा ५३ जना मारिए, २०० जनाभन्दा बढी घाइते भए र धनजनको ठूलो क्षति भयो ।
बीजेपीको साम्प्रदायिक राजनीतिबाट आजित भएका दिल्लीका अल्पसंख्यकहरूले ठूलो संख्यामा आम आदमी पार्टीलाई भोट दिएका थिए । त्यो पार्टीका धेरै सांसद निर्वाचित हुनुमा मुस्लिम समुदायकै मत निर्णायक पनि थियो । तर भर्खर मानिसहरूबाट जनमत लिएका एएपीका सांसदहरूले आफ्ना मतदाताको सुरक्षाका लागि समुदायसम्म जाने, साम्प्रदायिक भावना मत्थर पार्ने, दंगा भड्काइरहेका बीजेपीका नेताहरूलाई चुनौती दिने काम त गरेनन् नै, मिडियासामु प्रस्ट भाषामा दंगा र साम्प्रदायिक राजनीतिको विरोध गर्नसमेत सकेनन् ।
त्यसो गर्दा बहुसंख्यक हिन्दुहरूको जनमत भड्किन्छ र ५ वर्षपछिको चुनावमा बीजेपीका उम्मेदवारले आफूलाई हराउँछन् कि भन्ने उनीहरूको भय प्रस्ट देखियो । अर्थात्, भारतीय लोकतन्त्र र चुनावमा आजका दिनमा धार्मिक आस्था र राजनीति यसरी जोडिएका छन्, वैकल्पिक भनिएको पार्टीका राजनीतिज्ञहरूका लागि समेत मतदाताहरूको बाँच्ने अधिकारको रक्षाभन्दा सम्प्रदायविशेषको जनमत जोगाउनु बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ । ती घटनाक्रमपछि धेरैले भारतमा एएपीलाई ‘सफ्ट हिन्दुत्व’ मा विश्वास गर्ने वा बीजेपीको अलिकति पालिस गरिएको संस्करण मान्ने गर्छन् ।
त्यो आरोपको प्रतिकार गर्दै एएपीका नेताहरूले भन्दै आएका छन्— हामी यो वा त्यो कुनै सिद्धान्तवादी नभएर विकासवादी हौं, सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्छौं । त्यस्तो विचार र मूल्यनिरपेक्ष विकासको भाष्य कुन बेला सुशासन र समृद्धिको खोल त्यागेर नग्न साम्प्रदायिक राजनीतिका रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण हेरौं ।
यही वर्षको फेब्रुअरीमा पार्टीका प्रवक्ता तथा दिल्लीका विधायक राघव चड्ढाले एउटा जन्मदिनको पार्टीमा भएको एक हिन्दु युवकको हत्यालाई साम्प्रदायिक रङ दिए । केन्द्रको भाजपा सरकारमातहत रहने दिल्ली पुलिसले त्यो घटनामा साम्प्रदायिक कोण नभएको भनेर प्रस्ट पारे पनि उनी त्यसो गर्नबाट रोकिएनन् । बीजेपीका नेताहरूभन्दा पनि बढी हिन्दुवादी देखिएर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने उनको प्रयासको एएपीका अरू नेताले विरोध गरेनन् ।
यसरी आजका दिनमा एएपीसित मानिसहरूको मत लिनका लागि एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीजस्ता सेवामा गरेको सुधारबाट आउने सर्वमान्य राजनीतिक पुँजी छ भने अर्कातिर अल्पसंख्यकमाथिको अन्यायप्रति आँखा चिम्लेर वा उनीहरूको दानवीकरण गरेर बहुसंख्यकलाई रिझाएको विषाक्त र साम्प्रदायिक राजनीतिक पुँजी पनि छ ।
दिल्लीको दंगामा मारिनेमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी अल्पसंख्यक मुसलमान रहे पनि हिन्दु समुदायका मानिसहरू पनि मारिए अनि आगजनी र तोडफोडबाट दुवै पक्षको धेरै सम्पत्ति नष्ट भयो । मानिस विस्थापित भए, बस्तीहरू उजाडिए । पछि गएर दिल्लीको गृह प्रशासन हेर्ने बीजेपीको केन्द्र सरकारले अल्पसंख्यककै पीडित र अभियन्ताहरूलाई पीडक बनाएर जेलमा सडायो । बहुसंख्यक समुदायमा पर्ने बीजेपीका केही नेताले दंगा भड्काएको भिडियो प्रमाण सर्वत्र फैलिँदा पनि उनीहरू दण्डित हुनुको सट्टा पुरस्कृत भए ।
यो सबले एएपीलाई केही फरक परेन । कारण ? ऊ समृद्धिवादी र विकासवादी थियोÙ लोकतन्त्रवादी, न्यायवादी, मानवतावादी वा संविधानवादी थिएन । मानिसको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार अनि स्वतन्त्रता र न्यायको अधिकार आफैं कुण्ठित गर्ने उसको नियत वा व्यवहार थिएन । तर ती कुण्ठित भएर आफ्नै मतदाताहरूको क्रूर हत्या भइरहँदा पनि त्यसविरुद्ध ऊ उभिएन किनकि त्यसो गर्दा उसका अरू मतदाता बिच्किन सक्थे र अर्को चुनावमा उसलाई घाटा हुन सक्थ्यो । दिल्लीलाई ‘विकास’ गर्ने उसको महाभियानमा आँच आउन सक्थ्यो ।
नेपालमा आफूलाई त्यसै गरी विचारशून्य विकासवादी भन्ने मौसमी नारावालाहरूसित तपाईं–हामी डराउनुपर्ने कारण पनि त्यही हो । उनीहरूसित न के सही र के गलत भनेर छुट्ट्याउने ‘मोरल कम्पास’ छ, न गलतविरुद्ध अडान लिने नैतिक तागत छ, न कसैमाथि पनि अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने वैचारिक अडान छ । न मानिस मानिस बराबर हुन् भनेर युगौंदेखि अरूलाई तल पारेर आफूलाई ठूलो ठान्दै आएकाहरूको चित्त दुखाउने आँट छ ।
उसो त विचार र नैतिक अडान शून्य भए पनि केजरीवालको एएपीले झैं विकास गर्छन् भने आखिर तिनलाई समर्थन गर्दा के बिग्रियो त भनेर सोध्न सकिन्छ । तर विचारशून्य राजनीतिले विकास वा समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दैन । फरक समाजको कुनै पनि अनुभवको भद्दा नक्कल गर्दा उताका खराब कुराहरू मात्रै नक्कल हुने र बिसेक कुराहरू उतै छुट्ने खतरा टड्कारो हुन्छ । अर्कातिर विशुद्ध कुण्ठा र आत्मरतिको जगमा उभिएको राजनीतिले केही पनि हासिल गर्ने सम्भावना झनै न्यून हुन्छ ।
त्यसैले विचारबिनाको अँध्यारोमा तरबार चलाएर नेपालको गरिबी र कुशासन हटाउँछौं भन्ने तिलस्मीहरूलाई हामीले भन्नु जरुरी छ— विकास चाहिएको त हो तर त्यो समता, न्याय र स्वतन्त्रताको धरातलमा खडा हुनुपर्छ, न कि नेपालमा अभ्यासमा आएर असफल भइसकेको दैवी शक्तिमा आधारित विभेदपूर्ण संरचनाको धरातलमा ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७८ ०७:५७
सन्तानको सुख लिने हाम्रो अन्तिम पुस्ता !
बाँच्नलाई सास फेर्नुपर्छ, त्यसका लागि वायुमण्डलमा पर्याप्त स्वच्छता हुनुपर्छ । पिउनलाई शुद्ध पानीको जोहो हुनुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै उत्ताउलिएको मानिसले अन्तरिक्षमा पर्यटन सुरु गरिरहँदा जीवनका यी अवयव दुर्लभ बन्दै छन् ।
चैत्र १०, २०७७ जीवन क्षत्री
म शाकाहारी बनेको प्रसंग आएसँगै साथीले सोधे— किन ? जनावरहरूको माया लागेर ? ‘हो’, मैले भनें, ‘एउटा कारण त्यो पनि हो तर मुख्य कारण अर्कै छ । शाकाहारीहरूको पृथ्वीमा ‘कार्बन फुटप्रिन्ट’ सानो हुन्छ । अर्थात् पृथ्वीलाई तताउने ग्यासहरूको उत्सर्जन उनीहरूले कम गर्छन् ।’
अनि मैले उनलाई मानिसको भोजन, हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र समग्र पर्यावरणका सम्बन्धबारे व्याख्या गरें । आसन्न भन्दाभन्दै हाम्रो जीवनकालमै आइपुगेको जलवायु संकटसम्म हाम्रो कुराकानी पुग्यो । जलवायु संकटका कुरा गर्दा त्यसको गम्भीरता जनाउन मैले भनें, ‘सायद सन्तान जन्माएर तिनलाई हुर्काउनुको सुख लिने हाम्रो अन्तिम पुस्ता हो ।’ साथीहरू स्तब्ध भए ।
भोजन र पर्यावरण
हामी जति पनि वनस्पतिजन्य खानाहरू खान्छौं, ती सबै माटोमा फल्छन् । त्यस क्रममा बिरुवाले कार्बनडाइअक्साइड लिन्छन् र अक्सिजन वायुमण्डलमा फाल्छन् । त्यो खाना खाएपछि हामीले अक्सिजन लिन्छौं, कार्बनडाइअक्साइड फाल्छौं । एउटा चक्र पूरा हुन्छ । अन्न उब्जाउँदादेखिको हिसाब गर्ने हो भने तपाईंको जम्मा कार्बन उत्सर्जन शून्य (ढुवानी र पकाउँदाको हिसाब गर्ने हो भने न्यून) हुन्छ । मासु उत्पादनका क्रममा जनावर वा पन्क्षीले पनि स्थानीय घाँसपात मात्रै खाने हो भने तिनको आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्ट शाकाहारी मानिसको जस्तै हुन्छ । तर अक्सर त्यस्तो हुँदैन । जनावरहरूलाई टाढाबाट ओसारिएको, पकाइएको र प्रोसेसिङ गरिएको दाना ख्वाइन्छ । अक्सर ती हरेक कदममा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । अनि एउटै मानिसले जीवनकालमा त्यस्ता धेरै जनावरको मासु खपत गर्छ ।
मानिसका लागि अन्न र पशुका लागि दाना दुवै उत्पादन गर्दा अक्सर रासायनिक मल प्रयोग हुन्छ । त्यो मल बनाउँदा, ट्र्याक्टरले जोत्दा र बाली थन्काउँदा ठूलो मात्रामा ऊर्जा खपत हुन्छ र कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । त्यसैले औसत शाकाहारीको भन्दा औसत मांसाहारीका कारण हुने कार्बन उत्सर्जन निकै उच्च हुन्छ । त्यसबाहेक पशुपालनका क्रममा खपत हुने हर्मोनले हाम्रो शरीरका जैविक प्रक्रिया बिथोल्छ, एन्टिबायोटिकले प्रतिरोधी कीटाणु विकास गरिदिन्छ, कीटनाशक औषधिले क्यान्सर गराउँछ ।
चौपायाहरूले उग्राउँदा मिथेन नामक ग्यास पनि वायुमण्डलमा छाड्छन् जसले कार्बन डाइअक्साइडले भन्दा वायुमण्डललाई ३० गुणा बढी तताउँछ । त्यसैले हरेक मासुको आहार कार्बन डाइअक्साइड र मिथेनजस्ता ग्यास वायुमण्डलमा फाल्नका लागि जिम्मेवार हुन्छ । जस्तो, एउटा शाकाहारीले खासै कार्बन उत्सर्जन नगरी सय ग्राम भटमास खाएर तुरुन्त ४९ ग्राम प्रोटिन (दैनिक आवश्यक प्रोटिनको झन्डै ७२ प्रतिशत) पाउन सक्छ । अर्कोतिर सय ग्राम खसीको मासु खाने मांशाहारीले २५ ग्राम हाराहारी (दैनिक आवश्यकताको झन्डै आधा) प्रोटिन पाउँदा उल्लेख्य रूपमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन उत्सर्जन भैसकेको हुन्छ ।
मेरो पुस्ताका सबैजसो साथीका ससाना बच्चाहरू छन् । महँगो आधुनिक जीवन शैलीबीच बच्चा हुर्काउनु कठिन छ । बच्चाहरू हुर्केसँगै तिनको शिक्षादीक्षा र जीविकाको चिन्ता पनि बढ्दै जान्छ । त्यसो हुँदाहुँदै बच्चा जन्माउनु र हुर्काउनु विछट्ट आनन्दको कुरा हो । सन्तान हुर्कंदै गरेको देखेर बाबुआमाले जुन सुखानुभूति गर्छन्, बाँकी सुखका अनुभव त्यससँग तुलनीय हुँदैनन् । बालबालिकाले घरलाई उज्यालो र जीवन्त बनाइदिन्छन्, समाजलाई सम्भावनायुक्त र गतिशील । नवजात शिशुहरूको संख्या खुम्चिँदै गरेका समाजहरूसामु ठूला आर्थिक चुनौती हुन्छन् किनकि अहिलेको गरिखाने पुस्ता वृद्ध भएपछि तिनको रेखदेखसहित देशकै अर्थतन्त्र धान्ने जनशक्तिको कमी हुने निश्चित हुन्छ ।
सन्तानले दिने आनन्दभावको चुरोमा एउटा अस्तित्ववादी भावना हुन्छ— तिनले पनि एक दिन यसैगरी सन्तानलाई जन्म दिनेछन्, हामीले जस्तै सन्तानको सुख लिनेछन् र हाम्रो रगत वा डीएनए पुस्तौंसम्म हस्तान्तरण हुँदै जानेछ । तर यदि त्यसो भएन भने ? हाम्रा सन्तानको पुस्ता नै मानव सभ्यताको अहिलेको रूप देख्ने अन्तिम पुस्ता बन्यो भने ? उनीहरू हुर्किउन्जेल बच्चा जन्माउने र हुर्काउने विषय आम कल्पनाको विषय नै रहेन भने ? शाकाहारी भोजनबारे प्रश्न सोधेका साथीलाई मैले कुराकानीको यो विन्दुमा पुर्‍याएपछि संवादको माहोल गम्भीर बन्यो ।
पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमबारे निर्विवाद तथ्यांकहरू आएसँगै आसन्न जलवायु संकटलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा दुइटा मुख्य दृष्टिकोण छन् । एक, मानिसलाई सुसूचित गर तर यति नतर्साऊ कि खराब सम्भावनाबारेका भविष्यवाणीहरू गलत प्रमाणित हुँदै जाँदा जलवायु विज्ञानप्रति मानिसको विश्वास नै उडोस् । मानिस यति निराश पनि नहोऊन् कि हातै उठाइदिऊन् । दुई, सम्भावित प्रलयकारी अवस्थाहरूबारे मानिसलाई समयमै बताऊ ताकि प्रलय रोक्ने र झेल्ने दुवै काममा मानिस समय छँदै गम्भीर रूपमा लाग्न सकून् । नपत्याईकन प्रलय भोगिहाल्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।
साथीहरूसितको संवादमा त्यस दिन मैले दोस्रो रणनीति अपनाएको थिएँ । हिजोआज अक्सर वातावरण अभियन्ताहरू त्यसै गर्छन् । कारण, कुनै बेला भावी भन्ने गरिएका जलवायु संकटजन्य विपत्तिहरू अब हाम्रो वर्तमानका नियमित हिस्सा भइसकेका छन्— अस्ट्रेलिया र क्यालिफोर्निया, साइबेरियादेखि हिमालयका भीषण आगलागी र भारतमा वर्षौंवर्ष तन्किरहेका खडेरीहरूसम्म । ध्रुवहरूमा निरन्तर घट्दो हिउँदेखि सहजै मापन हुने गरी बढिरहेको समुद्रको सतहसम्म । कालापत्थरमा बदलिएका सेता हिमालदेखि निरन्तर खुम्चिँदै गरेका हिमनदी र सुक्दै गरेका नदीसम्म । चैतको सट्टा पुसमा फुल्न लागेका फूलदेखि बर्सेनि लाखौंको संख्यामा लोप हुँदै गरेका प्रजातिहरूसम्म । त्यसैले अब जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएका संकट प्राज्ञिक बहस वा अनुमान र भविष्यवाणीको विषय रहेन ।
अझै सम्भव छ, हाम्रा सन्तानले पनि ढुक्कसँग सन्तान जन्माएर हुर्काउनेछन् । तर त्यसको ग्यारेन्टी छैन र त्यसको सम्भावना निरन्तर घट्दो छ, जुन रफ्तारमा अहिले हामी कार्बन उत्सर्जन गर्दै छौं र पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दै छ, हाम्रो छोराछारीको पुस्ताले सामान्य जीवन बिताएर नातिनातिनी जन्माइदिने सम्भावना झनै घट्दो छ ।
हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ भौतिक सुखसुविधा जुन रफ्तारमा बढ्दै छ, भोकमरीजस्ता संकट जसरी विरल बन्दै छन्, प्रविधिले जसरी छलाङ लगाउँदै छ, त्यो हेर्दा हाम्रोभन्दा हाम्रा सन्तानको पुस्ताले सुखी र सुबिस्तापूर्ण जीवन बिताउनेछन् । साथै विकसित हुँदै गरेको प्रविधिले जलवायु संकटको समस्या समाधान गर्नेछ र महाविपत्ति आइलाग्ने छैन भन्ने पनि धेरैको विश्वास छ । तर विडम्बना के छ भने भविष्यमा मानिस जातिसित उपलब्ध हुने यावत् सुविधा लिनलाई पहिले उसले बाँच्नुपर्छ । बाँच्नलाई सास फेर्नुपर्छ, त्यसका लागि वायुमण्डलमा पर्याप्त स्वच्छता हुनुपर्छ । पिउनलाई शुद्ध पानीको जोहो हुनुपर्छ । क्यान्सरजस्ता भयानक रोग नलागी गुणस्तरीय जीवन बाँच्न माटोबाट विषाक्त रसायनहरू सीमित रहेको बाली उब्जनुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै उत्ताउलिएको मानिसले अन्तरिक्षमा पर्यटन सुरु गरिरहँदा जीवनका यी तीनै अवयव दुर्लभ बन्दै छन् । खासगरी तेस्रो विश्वको सहरी क्षेत्रमा बस्ने ठूलो जनसंख्या अहिले नै त्यस्तो कमजोर जैविक धरातलमा बाँच्न बाध्य छ ।
करोडौंबाट सुरु भएर अर्बौं पुग्ने अनुमान गरिएका ‘जलवायु शरणार्थीहरू’ जब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्छन्, जब तिनको प्रवेश रोक्न युद्धस्तरको दमन र हिंसा हुन्छ, जब पिउने पानीको स्रोतका लागि देशहरूबीच भयानक युद्धहरू हुन्छन्, तब अहिले हामीले देखेको विश्व र यहाँका व्यवस्थाहरू चिन्नै नसकिने गरी बदलिनेछन् । अहिले नै ब्रह्मपुत्र नदीको तिब्बती हिस्सामा चीनले बनाउन लागेका विशाल नयाँ बाँधहरूले भारत र बंगलादेशलाई पानीको संकटतिर धकेलिरहेका छन् । त्यसबाहेक दक्षिण चीनका नदीहरूबाट हजारौं किलोमिटर उत्तरतिर पानी फर्काउने चीनको अपारदर्शी आयोजनाबाट दक्षिण एसियाली देशहरू झनै त्रस्त छन् । नाइल नदीको पानी विभाजनलाई लिएर इजिप्ट, सुडान र इथियोपियाबीच अहिले चलेको जस्ता विवाद निरन्तर झाँगिँदै छन् । रेडक्रस र रेड क्रिसेन्टको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार गत छ महिनामा युद्धका कारण २३ लाख मानिस विस्थापित हुँदा जलवायु संकटका कारण १ करोडभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । झन्डै पाँच लाख मानिसको ज्यान लिने गरी सिरियामा चलिरहेको दशक लामो गृहयुद्धको एउटा मूल कारण खडेरी र ग्रामीण क्षेत्रबाट भएको मानिसको विस्थापनलाई मानिन्छ । भारतको चेन्नई सहर तथा दक्षिण अफ्रिका र इरानजस्ता देशले गत दशकमा समाजको भविष्यमै प्रश्न उठ्ने गरी पानीको भयावह अभाव झेलिसकेका छन् ।
त्यसो नहोस्, तर सम्भावना भएकाले एउटा अवस्थाको कल्पना गरौं । केही दशकपछि नेपालका नदीमा सुक्खायाममा पानीको बहाव अहिलेभन्दा निकै कम हुन्छ । भारतमा पानीको संकट झनै गहिरिन्छ । (सन् २०१९ को ‘वर्ल्ड रिसोर्सेज इन्स्टिच्युट’ को रिपोर्टअनुसार भारत संसारकै पानी संकट उच्च भएका १७ देशमध्ये १३ औं स्थानमा पर्छ र भारतभरि औसतमा भूमिगत जलाशयमा उपलब्ध पानीको ८० प्रतिशत निकालेर प्रयोग गरिसकिएको छ ।) तीव्र मरुभूमीकरणसँगै भारतको ठूलो जनसंख्या काकाकुल बन्छ । अनि नेपालमा चुरेको दोहनसँगै तराई–मधेसको मरुभूमीकरण तीव्र हुन्छ । हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत भएसँगै पर्यटन खुम्चिन्छ, जलाशयरहित विद्युत् आयोजनाहरू छ महिनाभन्दा बढी ठप्प भएर जलविद्युत् उद्योग संकटमा पर्छन् । सिँचाइ प्रणाली संकटमा परेसँगै हिउँदे बालीको उत्पादन कम हुन्छ र अन्नको मूल्य बढ्छ । डढेलो र बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिको संख्या र आकार अहिलेभन्दा निकै बढ्छ । अहिल्यै सास फेर्न कठिन काठमाडौंको हावा झनै प्रदूषित हुन्छ, श्वासप्रश्वास र क्यान्सरका रोगीको संख्या आकासिन्छ अनि नेपालका बाँकी सहरहरूले पनि काठमाडौंकै बाटो पछ्याउँछन् ।
यस्तो संकटबीच सर्वत्र सबै समस्याको एउटै समाधान दिने तानाशाहहरू उदाउँछन्, लोकतन्त्र र मानव अधिकार संकटमा पर्छन् । युरोप र अमेरिकातिर आप्रवासनका विरोधीहरू सत्तामा पुगेर उता शरणार्थी बनेर जाने बाटो पनि बन्द हुन्छ । उग्र राष्ट्रवादको उदयबीच अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र हिंसा निकै बढ्छ । त्यो अवस्थामा के हाम्रा सन्तानले आफ्ना सन्तान जन्माउने र हुर्काउने आँट गर्लान् ?
सुरुमा उल्लिखित कुराकानी हुँदा हामी एउटा साथीका एसयूभी (गाडी) चढेर एउटा कार्यक्रममा जाँदै थियौं । कसरी गाईवस्तु र भेडाबाख्राले वायुमण्डल तताउने ग्यासहरू उत्पादन गर्छन् भन्ने सुनेपछि गाडी चलाइरहेका साथीले अचानक भने— त्यसो भए त त्यो खसीलाई तुरुन्त काटेर मासु खाइहाल्नुपर्‍यो, ताकि त्यसले अरू कार्बनडाइअक्साइड निकाल्न नपाओस् ।
साथीले मजाक गरेका थिए तर नेपाली नागरिकका रूपमा जलवायु संकटप्रति हाम्रो समग्र रबैया त्यसभन्दा खासै फरक छैन । हिमाल र हिमनदीमा हिउँ घट्यो, घटोस्, आफ्नो जार वा गाग्रीमा पानी छँदै छ । हावा सासै फेर्न नमिल्ने गरी प्रदूषित भयो, होस्, कार र कोठामा एसी छँदै छन् । तरकारीमा विषादीको मात्रा अनियन्त्रित छ, होस्, आफूलाई क्यान्सर लागिसकेको छैन । जंगलमा भयंकर डढेलो लाग्यो, लागोस्, आफ्नो घर जलिसकेको छैन । अन्धाधुन्ध सडक खन्दा पहाडमा धेरैजसो मूलहरू सुके, सुकून्, आफूले पहाडी गाउँ छाडेर उपत्यका वा मधेस झरिसकियो ।
तर जब मैले हाम्रा सन्तानका सिंगो पुस्ता सन्तानविहीन हुने र मानव सभ्यता हाम्रै जीवनकालमा संकटमा पर्ने सम्भावना देखाएँ, साथीहरू झसंग भए । उनीहरू आफूसित सुरक्षित भविष्यको फरक कल्पना भएका कारण ढुक्क भएर बसेका थिएनन् । ‘इग्नोरेन्स इज ब्लिस’ भनेझैं ढोकाबाट छिरिसकेको जलवायु संकटतिर ध्यानै नपुगेकाले र दैनिक जीवनको दौडधुपबीच त्यता ध्यान नदिएकाले उनीहरू तबसम्म ढुक्क थिए ।
त्यस दिन उनीहरू स्तब्ध त भए तर तब मात्र जिम्मेवार नागरिक बन्नेछन् जब पेट्रोलियम गाडी छाडेर साइकल वा विद्युतीय गाडी चढ्नेछन्, शाकाहारी नबने पनि मांशाहारलाई न्यूनतम गर्नेछन् । भान्सामा ग्यास चुलो र बाथरुममा ग्यास गिजर छाडेर विद्युतीय चुलो र हिटर प्रयोग गर्नेछन् । गाडी र घरमा एसी जोड्न छाडेर सहरकै हावा सफा राख्ने उपायको खोजी गर्नेछन् । बाटो छेउका रूखदेखि जंगलहरूको फँडानीविरुद्ध आवाज उठाउनेछन् । राम्रो ब्रान्डको पानी खोज्न छाडेर नदीको प्रदूषण कम गर्न तथा भूमिगत जलाधार संरक्षण गर्न अघि सर्नेछन् । प्लास्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेछन् । आफ्नो पेसागत कामलाई कार्बन उत्सर्जन कम हुने गरी विकास गर्नेछन् । अनि छोराछोरीलाई महँगा कारमा एसी चलाएर सहर घुमाउनुको सट्टा तिनले वयस्क भएपछि सन्तान जन्माएर हुर्काउन सम्भव हुने वातावरण बनाउनेछन् ।
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७७ ०७:५७